ComoSoccer / Kooxda kubadda cagta wiilasha ee iskuulka Como ayaa sanadkii shanaad oo xiriir ah ku so
Kooxda kubadda cagta wiilasha ee iskuulka Como ayaa sanadkii shanaad oo xiriir ah ku soo baxay ka-qaybgalka tartanta Gobolka
Kooxda kubadda cagta wiilasha ee iskuulka Como Park ayaa waxay ku soo bexeen inay sanadkii shanaad oo aan kala go’ lahayn ka qaybgalaan tartanta cayaaraha dugsiyada sare ee Minnesota. Kooxdan oo lagu magacaabo Cougars ayaa waxay kaga guuleysteen kooxda Mahtomedi 1-0 intii lagu jiray cayaarha qeybta 4A taas oo ay ugu soo gudbeen tartanka.
Kooxda Cougars (11-6-3) Kooxda Cougars (11-6-3 waxaa ka guuleystay kooxda St. Thomas Academy (16-4-0) oo iyagu fadhiyey lambarka 3’aad ee ciyaartii is ree reebka gobolka.
“Qorshaha cyaartanadu wuxuu ahaa mid fudud, laakiin waa inaan qiraa in kooxta St. Thomas ay dadaal muujiyeen”, Tabobaraha Como Park Jonah Fields ayaa arrintan u sheegay Pioneer Press. Markaan aragnay firfircoonida ay muujieen ayaan ku khasbanaanay inaan badalno qorshahanaga.”
Inkastoo aysan kooxdu guulaysanin, Fields wuxuu ku faraxsanyahay sida wanaagsan ee kooxka Cougars ay u ciyaaree.
“Inaan ku soo baxno ciyaaraha gobolka shan sano oo isku xigta runtii waa wax weyn oo taariikhi ah” ayuu yiri Fields. Arrintani waxay tusinaysa in ciyaaraha kubadda cagta ee iskuulka Como uu wanaagsanyahay. Farxad ayay ii tahay in dhallinyaradina ay aniga iyo bulshadaba matalaan.”
Sanad walba, Cougars waxaa la isugu keenaa ciyaarnahadii sii ciyaari jiray, aradyda ka timaada barnaamijka B-squad, iyo waliba arday ku cusub Saint Paul.
Tababaraha Como wuxuu yiri ciyaartooyda yar-yar waxaa laga yabaa inaad ku wanaagsanyihiin ciyaaraha, laakiin waxaa dhacda in ciyaartoyda waaweyni ka hor istaagaan ka qaybgalka ciyaaraha – iyadoo lagu dhoho suga wakhtigiina. Sanad kasta waxaa jira dhallinyaro soo baxda marka loo baahdo.
Sidoo kale Fields wuxuu yiri “ciyaartooyda soo laabata waxay ku faraxsanyihiin shaqada adag ee barnaamijka, iyagoo is ixtiraamaya waxay qaban karaana qabanaya”. Wuxuu intaa ku daray “ Ciyaartoydani waxay aaminsanyihiin in danta kooxda laga hrumariyo wax kasto kale.”
Saddex su’aalood oo la weydiiyey Tabobaraha Como Park ee kubadda cagta Jonah Fields
Wax ma nooga sheegi kartaa kooxda sanadkan?
Sanadkan kooxdu waxay ka koobantahay 10 ciyaartooydii hore ah iyo sagaal cusub. Toban ka mid ah ciyaartooydu waa fasallada labo-iyo-tobnaad, lixna waa fasalka kow-iyo-tobnaad labana waa fasalka tobnaad. Hal arday ayaa ku cub kooxda.
Kooxda sanadkan waxay guuleeysteen 11 jeer, waxaa laga guuleystay lix jeer waxayna barbar-dhac galeen saddex jeer. Waxaan dhalinay 46 gool waxaana nalaga dhaliyey 26.
Ciyaartooydanadu waa kuwo karti badan leh. Way dadaalaan si fiican bayna ula shaqeeyaan tababarahooda. Waxaan ku ciyaarnaa jadwal adag. Ciyaaraha qorshaysan ee caadiga ah marka laga soo tago, waxaan Washington Tech (Rice Street Rivalry Game), Humboldt (Mayor's Cup) iyo Central aan la ciyaarnaa ciyaaro aan qorshaysnayn. Waxaan sidoo kale la cayaarnaya Orono, oo ah kooxda goboka difaacaysay oo iyagu nagaga guuleystay tartantii gobolka markii wakhti dheeraad ah lagu daray oo iyagu nagaga guuleystay tartantii gobolka markii wakhti dheeraad ah lagu daray.
Maxaa aad kuu farax galiya?
Waxaan ku faraxsanahay in kooxdani caado ka dhigatay inay si taburucaad ah wakhtigooda u galiyaan barnaamijka kubadda cagta ee dhalanyarada ee Northwest Como Rec Center.
Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay farriin aan ka helay tabobaraha kooxda Hill Murray ka dib markii aan kaga raynay ciyaartii is-ree-reebka. Wuxuu ii sheegay inuu la yaabay sida ay kooxdaydu u muujinayeen daganaansho, iyo sida wanaagsan ee ay u dhaqmeen inta ay ciyaartu socotay iyo markay dhamaatay.
Marka tabebare kaa soo horjeeda uu dareemo xushmada iyo ixtiraamka kooxdaada, anigu ka tabebare ahaan waxaan dareemay farxad. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in kooxda wiilashu taageereen kooxaha gabdhaha, oo waliba ay u dhaqmeen si sharaf ay ku dheehantahay, iyagoo tusiyey saaxiibtinimo.
Maxaa caqabada ah oo ay kooxdu ka gudbeen sanadkan intii ay ku sii jeedeen tartanka qeybihiisa kala duwan?
Kooxdu waxay ku guul-darreysatay afar ciyaarood laakiin arrintan waxay u siyaadisay inay noqdaan koox adag oo isku tashata.
Kabtanka kooxda, Tyler Johnson wuxuu kooxda ka tirsanaa tan iyo fasalkiisii tobnaad. Sanadkan ayaa afar u ah inta uu ka qayb galaya ciyaaraha gobolka, marka lagu daro tartankii ciyaaraha goboka ee 2013.
Kevin Yao isgauna wuxuu kooxda ka tirsaanaa tan iyo fasalkiisii kow-iyo-tobnaa, sanadkan ayaa saddex ugu ah ka-qaybkiisa gobolka.
Siddeeda ciyaaryahan ee kale waxay kala yihiin Bwe Doh Htoo, Tha Dah, Nathan Stover, Robin Htoo, captain Law Htoo, Mohamud Adan, Kher Lin Kyaw, iyo Dah Bleh Taw.
Ciyaartoydanada cusub ee sanadkan waxay kala yihiin Archie Gjerdrum, Shar Reh and Henry Aryiku; juniors Rafael Queudo, Saw Johny, and Kobby Owu; sophomores Mu Ku Shi and Pa Sad Tit; iyo freshman Abdelaziz.
Warbixinta Ciyaartoyda oo kooban
Bwe Doh Htoo wuxuu kooxda u dhaliyey 11 gool wuxuuna caawiyey shan gool.
Kobby Owu wuxuu dhaliyey siddeed gool wuxuuna caawiyey afar.
Gool-hayaha kooxda Mu Ku Shi wax badan ayaa celiyey sanadkan, oo ay ka mid tahay ciyaarihii lagu aadayey tartanka gobolka
Difaaca kooxda Tyler Johnson oo faalladiisa lagu soo qaatay wargeyska Star Tribune qeybtiisa ciyaaraha ee All-Metro soccer team